Bagged multi - petal black garlic - China Shandong Gongxian Gmengyuan
paprika ntụ ntụ
Chili agba & Mgbaaka
Chili flakes / Mwute Chili
chili ntụ ntụ
Description nke nwa garlic Mgbe a-agafere site biotech, nwa garlic nwere ike atụgharị protein n'ime 18 iche iche nke "amino asịd" dị mkpa maka kwa ụbọchị ahụ mmadụ, nke nwere ike ngwa ngwa etinye obi gị dum site idem. Ke "Designer Foods Mmemme" akụkọ na osisi nri cancer mgbochi research rụrụ site USNCI dị ka etiti nke ọmụmụ ihe ahụ, banyere 48 iche iche nke irè oriri na-depụtara, otu nke "garlic" bụ nke abụọ nke ọ bụla. Black garlic tumadi nwere 18 amino asịd, Vita ...
Description nke nwa garlic
Mgbe a-agafere site biotech, nwa garlic nwere ike atụgharị protein n'ime 18 iche iche nke "amino asịd" dị mkpa maka kwa ụbọchị ahụ mmadụ, nke nwere ike ngwa ngwa etinye obi gị dum site idem.
Ke "Designer Foods Mmemme" akụkọ na osisi nri cancer mgbochi research rụrụ site USNCI dị ka etiti nke ọmụmụ ihe ahụ, banyere 48 iche iche nke irè oriri na-depụtara, otu nke "garlic" bụ nke abụọ nke ọ bụla.
Black garlic tumadi nwere 18 amino asịd, vitamin (C, B, A), Chọpụta ọcha (site, potassium, magnesium, sodium, calcium, calcium, sịlịkọn, aluminum, zinc, selenium na germanium), sọlfọ ogige ma carbohydrate.
The mbara ọrụ nke nwa garlic bụ 10 ugboro karịa nkịtị garlic; ya antioxidant ike bụ 15 ugboro karịa nkịtị garlic.
Tian Koukuan, Japan ama ọkachamara nke molekụla cell bayoloji na prọfesọ na Mie University dị na ya nnyocha ọ na-egosi na nwa garlic antioxidant ike bụ n'etiti ndị kasị mma ihe karịrị 300 iche iche nke nri antioxidant ọrụ nke iche.
Mmetụta nke nwa garlic
Mgbochi mkpali: The allicin ẹdude ke nwa garlic nwere antibacterial mmetụta.
Anti-akpụ mmetụta: Black garlic nwere ike igbochi njikọ nke ndị "carcinogen" nitrosamines, na inhibit uto nke cancer mkpụrụ ndụ, na-egbu "cancer mkpụrụ ndụ". "Ajoene" (diallyl thiosulfate) bụ na ya anụ ma na nwere a ịrịba inhibitory utịp ke uto nke dị iche iche na akpụ mkpụrụ ndụ, karịsịa leukemia mkpụrụ ndụ.
Iji gbochie cardiocerebrovascular ọrịa: ọzọ aha otutu nke "nwa garlic" nyere ndị ọkà mmụta sayensị bụ "ọbara scavenger."
Iji na-akwalite ntutu ibu: The obodo mmanụ nke nwa garlic nwere ike mee ngwangwa ọbara eruba direction (sebaceous gland) na ntutu follicle eruba, si otú na-akwalite ntutu ibu. Ihe ọzọ bụ na, ọ na-nwere ọgwụgwọ mmetụta maka nkwọcha
Aka dịghịzi ọrụ: Animal nwere na-egosi na abụba-soluble obodo mmanụ "nwa garlic" nwere ike budata melite phagocytic ọrụ nke "macrophage" ma welie dịghịzi usoro.
Iji na-akwalite ọgụgụ isi ibu: "nwa garlic" ihe na vitamin B1 na mmadụ nwere ike na-emepụta "garlic amine", na "garlic amine" nwere ike kwalite na-akpali vitamin-B1 ọrụ, welie carbohydrate ọxịdashọn mmetụta na-enye ezu ike maka mkpụrụ ndụ ụbụrụ ịnọgide na-enwe ngwa ngwa echiche.
Ekwukwa n'akwụkwọ mmetụta: garlic nwere nnọọ elu ekwukwa n'akwụkwọ uru, na ndị niile na nri ndị dị oké mkpa ka ahụ mmadụ.
Iji chebe imeju: Black garlic nwere ike antioxidant ọrụ. Ọ nwere ike inhibit "lipid peroxidase" mmebi na imeju cell akpụkpọ ahụ Ọdịdị na-echebe imeju.
Iji mezie ọbara sugar etoju: nwa garlic nwere ịrịba mmetụta ọbara sugar akara.
Black garlic nwere ike belata ihe ize ndụ nke prostate cancer: germanium na selenium, na sọlfọ ogige ma ịnweta ọcha na nwa garlic.
Ị nwere ike iri 2-3 iberibe kwa ụbọchị. First i nwere ike bee na garlic wee rie ya ozugbo. Black garlic nwekwara ike ime ka efere na tii, mgbe weere mma na ya pụta. Ndị na-elu esịtidem okpomọkụ na-atụ aro ka ewe otu ụbọchị nke ọ bụla. Ndị na-arịa ọrịa kansa ọbara na yiri mgbaàmà nke coagulation ọrịa na-atụ aro ka ha rie.
Black garlic nwere a dịgasị iche iche nke Chọpụta ọcha na vitamin na mmadụ mkpa. Ọ nwere ike na-amụba polyphenols na-enye mmadụ ọrụ SOD, na nwere 18 iche iche nke amino asịd.
adabara ìgwè mmadụ
Ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ma ọ bụ ọrịa ndị nwere: anaemia, ígwè erughi na calcium erughi; obi na cerebrovascular; hyp
Previous: Single bagged black garlic
Next: Mkpọ black garlic
Black Galik wepụ
Black Galik Price
Black Galik Mkpụrụ
Chinese Black Galik
dehydrated Black Galik wepụ
dehydrated Mịrị Galik flake
Mịrị eghe garlic
Mịrị garlic Products N'ihi Export
Fresh Galik N'ihi Sale
Fresh ginger na garlic
Fresh peeled Galik Bulk
garlic nsogbu dị iche iche
na garlic na China
ginger na garlic Achoro
Healthy Black Galik wepụ
Multiple Blac k Galik
Black gwere garlic
Mkpọ black garlic